HERO OF MYANMAR: နိုင်ငံရေးလုပ်သက် ၂၃ နှစ်တောင် ပြည့်ခဲ့သော်လည်း ပြစရာ အောင်မြင်မှုတစ်ခုမှမရှိ
နိုင်ငံရေးလုပ်သက် ၂၃ နှစ်တောင် ပြည့်ခဲ့သော်လည်း ပြစရာ အောင်မြင်မှုတစ်ခုမှမရှိ
[8:28 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
၂၇ . ၈ . ၂၀၁၁ ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
- ဧရာဝတီအရေးသည် အမျိုးသားရေး click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်းပွဲ (ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်) (ဓာတ်ပုံ) click
- လူမှုကယ်ဆယ်ရေး ပရဟိတလုပ်သူကို ထောင် (၁၀) နှစ်ချ click
- The Lady ဇာတ်ကား အီတလီ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ဖွင့်လှစ်ပြသမယ် click
- NLD လူငယ် ကိုဘမောင် ကွယ်လွန် click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားဝင်ပါတီဆိုတာ ဘယ်ပါတီကို ပြောတာလဲ (ဆောင်းပါး) click
- မြန်မာတပ် အမြောက်ဆံသင့်သော ဆရာမ မိုင်းအောင်၌ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာပြ click
- ကြံ့ဖွံ့ပါတီက လူမျိုးစုပါတီဝင်တွေ ခြိမ်းခြောက် click
- မြောက်ဦးကို အာဏာပိုင်များက လက်စားချေပြီ click
- Dutch Disease (ဒတ်ခ်ျရောဂါ) အကြောင်း သိကောင်းစရာ (ဆောင်းပါး) click
- နိုင်ငံတော်စီမံကိန်း အကြောင်းပြ လယ်မြေသိမ်းကာ ပြန်လည်ရောင်းချမှုများရှိ click
- ဒုက္ခသည်များကို ပြန်လက်ခံရန် မြန်မာက အပြုသဘော တုံ့ပြန် click
- ရေထဲက တာချီလိတ် click
- မူးမြစ်ရေ လွှမ်းတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ မအူပင်ရွာ (ဓာတ်ပုံ) click
- ဖုတ်ဖရမြို့နယ်က မြန်မာရွှေ့ပြောင်းကလေးတွေ သုံးရေကြောင့် အရေပြားရောဂါဖြစ်ပွားမှု များပြား click
- မြန်မာနိုင်ငံ HIV ကာကွယ်ရေးနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ဟန့်တားရေး လစ်ဟာဆဲ click
- တောင်ကိုရီးယားသတင်းတွင် ဖော်ပြထားတဲ့ ကုလကိုယ်စားလှယ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဓာတ်ပုံများ click
- ကျေးရွာနဲ့သာသာနာကို ဖျက်ဆီးနေသော အတွင်းရေးမှူးတဦးအား ပြည်နယ်အစိုးရမှ ထိရောက်စွာ အရေး ယူပေးပါရန် (ဇရပ်လှရွာမှ လာတဲ့စာ) click
- အော်စကာ (ကဗျာ) click
- ထိုင်းတောင်ပိုင်း စစ်သွေးကြွ တိုက်ခိုက်၊ ၆ ဦး သေ click
- အဘူဂျာမြို့ ကုလသမဂ္ဂရုံး အစွန်းရောက်တွေ ကားဗုံးခွဲ၊ ၂၀ ခန့် သေ click
- ကုလသမဂ္ဂရုံး တိုက်ခိုက်ခံရလို့ အကြီးအကျယ် ပျက်စီးသွား click
- အယ်လ်ဂျီးရီးယားမှာ အသေခံ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရ click
- ထရီပိုလီ ဆေးရုံက ထိတ်လန့်ဖွယ် မြင်ကွင်း click
- အမေရိကန်မှာ ဟာရီကိန်း Irene ၀င်မွှေတော့မယ် click
- အမေရိကားရဲ့ သမိုင်းဝင် ဟာရီကိန်း တိုက်ခတ်မှု ပထမနေ့ click
ကချင်ပြည်နယ်အရေးနှင့် ပင်လုံညီလာခံ (၂)
ကချင်ပြည်နယ် ပေါ်ပေါက်လာသော သမိုင်းသည် ပင်လုံညီလာခံမှ စတင်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ပင်လုံညီလာခံ အကြောင်း အနည်းငယ် ပြန်ပြောဖို့ လိုပါသည်။ အားလုံး သိပြီး ဖြစ်သည့် အတိုင်း ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာ ဗိုလ်ချုပ်တို့ လန်ဒန်ကို သွားပြီး လွတ်လပ်ရေးအတွက် အရေးဆိုတဲ့ အချိန်တွင် နောက်ပိုင်းကနေ ရှမ်းစော်ဘွားများက ကန့်ကွက်စာ ပေးပို့ခဲ့တာ အားလုံး သိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ရှမ်းစော်ဘွားတွေလိုပင် ဗန်းမော် တောင်တန်း ဒေသက ကချင် ခေါင်းဆောင်များနဲ့ စော်ဘဦးကြီးရဲ့ ကရင် အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်တို့က ဗိုလ်ချုပ်တို့ဟာ တောင်တန်းသားများကို ကိုယ်စား မပြုဘူး ဆိုပြီး ကန့်ကွက်တဲ့ ကြေးနန်းများ ပေးပို့ခဲ့သည်ကိုမူ သိသူ နည်းပါသည်။
လန်ဒန်မှာ ဆွေးနွေးနေချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်တို့က လွတ်လပ်ရေး အကြိုကာလမှ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ၀င်ပါနေသည့် ဘုရင်ခံ အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ ( ၀န်ကြီးအဖွဲ့) ထဲမှာ တောင်တန်း ဒေသ ကိုယ်စားလှယ်များ ထည့်ဖွဲ့ပြီး ဘုရင်ခံက တိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်ကို ဖျက်ရန်၊ လွတ်လပ်ရေး ပေးသည့်အခါ တောင်တန်း ဒေသတွေကို ပြည်မနဲ့ ပေါင်းပြီး ပေးရန် ဆိုသည့် အချက်အပေါ် အခြေခံကာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်ဘက် အထက်ပါ ကြေးနန်း သုံးစောင်ကို ပြပြီး တောင်တန်းသား များ၏ သဘောထားသည် ဗိုလ်ချုပ်တို့ ပြောသလို မဟုတ်ဟု ပြန်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရှမ်းပြည် လူထု အစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြီး စော်ဘွားများကို မထောက်ခံကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို ထောက်ခံကြောင်း ကြေးနန်းများ ပို့ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ ကြေးနန်း သုံးစောင်၏ အကျိုးဆက်ကို ပယ်ဖျက်ရန် မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ထို့ကြောင့် အောင်ဆန်း - အက်တလီ စာချုပ်တွင် မြန်မာဘက်က ဘုရင်ခံ အမှုဆောင် အဖွဲ့တွင် တောင်တန်းသားများ ထည့်သွင်းရန်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗမာ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုင်းရင်းသားများ ဆွေးနွေးသည့် အထူး ညီလာခံ ကျင်းပရန်၊ ထိုညီလာခံ ပြီးဆုံးပါက တောင်တန်းသားများ အနေဖြင့် ပြည်မနှင့် ပေါင်းပြီး လွတ်လပ်ရေး ယူလို မယူလို စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်းရန် ဆိုသည့် အချက် နှစ်ချက်ကို သဘောတူခဲ့ရသည်။ တနည်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားများကို ဘုရင်ခံ အုပ်ချုပ်မှု အောက်မှ ဆွဲထုတ်ပြီး နိုင်ငံရေး အဆင့်မြှင့်ကာ ဘုရင်ခံ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်း သွတ်သွင်းရေး ကိုပင် စော်ဘွားများနှင့် ပြန်ဆွေးနွေး ရမည့်ဘ၀သို့ ရောက်သွား ခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏။ ထိုသဘော တူညီချက် အရ ဗိုလ်ချုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရောက်ချိန်တွင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် စီစဉ်ခဲ့ရာမှ ပင်လုံညီလာခံ ပေါ်ပေါက် လာရခြင်း ဖြစ်သည်။
ပင်လုံညီလာခံကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် ကချင် ခေါင်းဆောင်များကလည်း ညီလာခံ တက်ရောက်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြ သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်က ကချင် တောင်တန်း ဒေသတွင် မြစ်ကြီးနား ဒေသနှင့် ဗန်းမော် ဒေသဟု နှစ်ပိုင်း ကွဲနေသဖြင့် မြစ်ကြီးနား ဒေသ ကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦး၊ ဗန်းမော် ကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦးကို ကချင် လူကြီးများက ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ မြစ်ကြီးနား အဖွဲ့တွင် ဆမားဒူးဝါးဆင်ဝါးနောင်၊ ထိန်နန်းဂွန်ဂျာ၊ ဦးဖော်နော်၊ ဒူဝါဇော်ရစ်၊ ဦးကရိန်နော်၊ ဦးဒိန်ရတန်၊ ဦးချန်းဇုံးနှင့် ဦးထောင်ဥတို့ ပါဝင်ပြီး ဗန်းမော် အဖွဲ့တွင် ဒူဝါဇော်လ၊ ဒူဝါဇော်လွန်း၊ ဦးလဘန်လနှင့် ဦးလဘန်ဂရောင်တို့ ပါဝင်သည်။ ကချင် ကိုယ်စားလှယ်များ အကြားတွင် မြစ်ကြီးနား အဖွဲ့က ပြည်မနှင့် အတူ လွတ်လပ်ရေး ယူလိုသည့် သဘောထား ရှိပြီး ဗန်းမော်အဖွဲ့က အင်္ဂလိပ် လက်အောက်တွင်ပင် ဒိုမီနီယံ အဆင့်ဖြင့် နေလိုသည့် သဘောထား ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်ဖတ်ကာ ကျေးရွာတွင် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် ဒူဝါဇော်လွန်း ခေါင်းဆောင်သည့် ဒိုမီနီယံ အဆင့်ဖြင့် နေထိုင်လိုသူများက အကယ်၍ ပြည်မနှင့် တစ်ပါတည်း လွတ်လပ်ရေး ယူရမည် ဆိုပါက ကချင် ပြည်နယ် အဖြစ်ပါဝင်ရန်၊ ကချင် ပြည်နယ် အတွင်းသို့ လက်ရှိ ကချင် တောင်တန်း ဒေသများ သာမက ကသာ မြောက်ပိုင်းနှင့် ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား၊ မိုးကောင်း၊ မိုးညှင်း မြေပြန့်ဒေသ များပါ ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုတင်ပြချက်များ အပေါ် ဆွေးနွေးပြီး နောက် အောက်ပါ အတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ သည်-
၂။ ကချင်အမျိုးသားများအတွက် ကချင်ပြည်နယ်သီးခြားထူထောင်ရန်။
၃။ ကချင်ပြည်နယ်၌ လက်ရှိ ကချင် တောင်တန်း ဒေသများ သာမက ဗန်းမော်နှင့် မြစ်ကြီးနား ခရိုင် တစ်ခုလုံးနှင့် ကသာ မြောက်ပိုင်း မြေပြန့်ဒေသများပါ ပါဝင်စေရန်။
၄။ ကချင်နှင့်ဗမာနှစ်ဘက်ကြား နယ်နမိတ် သတ်မှတ်ရေးကို ဆွေးနွေးရန်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သည့် ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ပင်လုံညီလာခံသို့ တက်ရောက်ချိန်တွင် ကန့်သတ်ချက် နှစ်ခု သို့မဟုတ် ဖိအားပေးမှု နှစ်ခုနှင့် တက်ရောက် ရသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ ဗိုလ်ချုပ် အနေဖြင့် ပြည်သူများအား တစ်နှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေး ရရှိအောင် လုပ်မည်ဟု ကတိ ပေးထားခဲ့မှု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မတိုင်မီ အခြေခံဥပဒေ တစ်ခုရှိပြီး လွတ်လပ်ရေး ရယူနိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ပင်လုံ ညီလာခံ ပြီးပါက အင်္ဂလိပ်နှင့် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းမည့် တောင်တန်း ဒေသ စုံစမ်းရေး အဖွဲ့က ကြားနာမှုများ စတင် ပြုလုပ်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန် မတိုင်မီ တိုင်းရင်းသား များဘက်က ပြည်မနှင့် ပေါင်းပြီး လွတ်လပ်ရေး ယူမည် ဆိုသည့် သဘော တူညီချက်ရန် အရေးကြီး နေပါသည်။ အဆိုပါ ကန့်သတ်ချက် နှစ်ခုကြောင့် ပင်လုံ ညီလာခံတွင် ဆွေးနွေး သည့်အခါ ဖဆပလ ခေါင်းဆောင် များဘက်တွင် အားနည်းမှု တစ်ချို့ ရှိနေသည်ဟု ဆိုလျှင် မှားမည် မထင်ပေ။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပင်လုံညီလာခံ ဆွေးနွေးမှုများ စတင်သည်နှင့် ကချင် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က ကချင် ပြည်နယ်ကို လက်ရှိ ကချင် တောင်တန်း ဒေသများ သာမက ဗန်းမော်နှင့် မြစ်ကြီးနား ခရိုင် တစ်ခုလုံးနှင့် ကသာ မြောက်ပိုင်း မြေပြန့် ဒေသများပါ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းရေးကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းရေးကို သဘောတူ သော်လည်း ကချင် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တောင်းဆိုသည့် ဗန်းမော်နှင့် မြစ်ကြီးနား ခရိုင်မှ ကျန်ဒေသများ၊ ကသာ မြောက်ပိုင်း ဒေသများတွင် နေထိုင်သူ အများစုမှာ ရှမ်း၊ ဗမာများ ဖြစ်နေခြင်း၊ အဆိုပါ ဒေသများမှာ ၁၉၃၅ ဥပဒေအရ အပိုင်း ၂ ဇယားဝင် ဒေသများ ဖြစ်နေသဖြင့် ကချင် တောင်တန်း ဒေသများ ပါဝင်နေသည့် အပိုင်း ၁ ဇယားဝင် ဒေသများ အတွင်းသို့ ပြောင်းပေးရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ကချင် ပြည်နယ်ကို မူလ သတ်မှတ် ထားသည့် အတိုင်း ကချင် တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်သည့် ကချင် တောင်တန်း ဒေသများဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။
သို့သော် ကချင်ခေါင်းဆောင်ဒူဝါဇော်လွန်းက အထက်ပါ တောင်းဆိုချက်ကိုသာ ဆွဲကိုင်ပြီး တောင်းဆို နေသဖြင့် ဆွေးနွေး ပွဲမှာ ရှေ့မတိုးနိုင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဗိုလ်ချုပ်က စိတ်ဆိုးပြီး ရန်ကုန် ပြန်မည်ဟု စီစဉ်သည့် အချိန်ကျမှ ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေး ပြန်ထိုင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ထံ အဆိုပြုချက် အသစ်များ တင်ပြခဲ့ရာ နောက်ဆုံးတွင် ဗိုလ်ချုပ်က အောက်ပါ အတိုင်း သဘောတူညီခဲ့သည်-
၁။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် မည်သည့် ဒေသများ ပါဝင်ရမည်ကို ဖော်ပြခြင်း မပြုဘဲ ကချင်ပြည်နယ် ထူထောင်ရေးကို မူအားဖြင့် သဘောတူသည်။
၂။ ကချင်ပြည်နယ် ထူထောင်ရေးကို ဖဆပလက လက်ခံလာအောင် မိမိရှင်းပြမည်။
၃။ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း ပါဝင်ရမည့် ဒေသများ သတ်မှတ်ရေးကို တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်တွင် စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်မည်။
ဒီလိုသဘောတူညီခဲ့တဲ့ အတွက် ပင်လုံစာချုပ်မှာ ကချင်ပြည်နယ် အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပူးပေါင်း ထားပြီးသည့် ဤမြန်မာ ပြည်အတွင်း သီးသန့် ကချင်ပြည်နယ် တခု နယ်နမိတ် သတ်မှတ်၍ တည်ထောင်ရန် ပြဿနာမှာ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်တွင် ဆုံးဖြတ်ရန် ဖြစ်သော်လည်း ဤကဲ့သို့ သီးခြားပြည်နယ် တခု ထားရှိ သင့်ကြောင်းကို သဘောတူညီကြသည်၊ ဤရည်ရွယ်ချက် အထမြောက်ရန် အလို့ငှာ ပထမ ခြေလှမ်း အနေဖြင့် ၁၉၃၅ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံတော် အစိုးရ အက်ဥပဒေ အရ နောက်ဆက်တွဲပါ စာရင်းပါအပိုင်း (၂) ဒေသများ ကဲ့သို့ မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်းမော် ခရိုင်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် နယ်စပ် ဒေသ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဒုတိယ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်အား ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ရမည်၊ ဟု ထည့်သွင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါ့ကြောင့် ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကချင် ပြည်နယ် ရှိသင့်တယ်လို့ လက်ခံပေမယ့် ကချင် တိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းသလို မြေပြန့်ဒေသများ ထည့်သွင်းပေးဖို့ ဆိုတာကို သဘော မတူခဲ့ကြသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဘုရင်ခံ အမှုဆောင် အဖွဲ့ ( ၀န်ကြီးအဖွဲ့က ) Ress William ခေါင်းဆောင်တဲ့ တောင်တန်း ဒေသ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုစုံစမ်းရေး အဖွဲ့က တောင်တန်း ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားများနှင့် သာမက ကချင် ပြည်နယ် အတွင်း ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းရန် တင်ပြထားသည့် ဒေသ များမှာ ဗမာ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့်ပါ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဗန်းမော် ခရိုင် အပိုင်း၂ ဇယားဝင် ဒေသများတွင် နေထိုင်သည့် ရှမ်း၊ ဗမာများ၏ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့( ဦးဘိုးတီ၊ ဦးစောရီ၊ ဦးဘအောင်၊ ဦးစောရီ ) တို့က ကချင် ပြည်နယ် အတွင်း မြေပြန့် ဒေသများ ဖွဲ့စည်းမည့် အစီအစဉ်ကို သဘော မတူကြောင်း၊ ထိုဒေသများတွင် နေထိုင်သည့် ပြည်သူများထံမှ လူထု ဆန္ဒခံယူ သင့်ကြောင်း တင်ပြခဲ့သည်။ မိုးကောင်း၊ မိုးညှင်းဒေသမှ ကိုယ်စားလှယ် များကလည်း အထက်ပါ အတိုင်း ထွက်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ထို့ကဲ့သို့ အပိုင်း၂ ဒေသရှိပြည်သူများ၏ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဆန့်ကျင်မှုကြောင့် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စုံစမ်းရေး အဖွဲ့က အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသည့် အခါ ကချင် ပြည်နယ် အတွင်း အပိုင်း ၂ ဇယားဝင် ဒေသများ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းသင့်၊ မသင့်ဆိုသည့် ပြဿနာကို တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ဒေသနေ ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစား သင့်ကြောင်းသာ ဖော်ပြပေးခဲ့သည်။
၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကချင်ပြည်နယ်
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပရာ ဖဆပလ က လူထု ထောက်ခံမဲ ၉၅% ကျော်ဖြင့် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်က အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံရမည့် လမ်းညွှန်ချက် ၇ ချက်ကို ချမှတ်ပေးပြီး ၅၅ ဦးပါ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထို ကော်မတီတွင် ရှမ်းကိုယ်စားလှယ် ခြောက်ဦး၊ ကရင် ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦး၊ ကချင် ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦး၊ ချင်း ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးနှင့် သံလွင် ခရိုင် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုကော်မတီ တွင်လည်း ဒူဝါဇော်လွန်းက မူလ တောင်းဆို ထားသည့် နယ်မြေ အားလုံးကို ကချင် ပြည်နယ် အတွင်း ထည့်သွင်း ပေးရန်နှင့် ခွဲထွက်ခွင့် အခွင့်အရေးကိုလည်း ကချင် ပြည်နယ်ကိုပါ ပေးအပ်ရန်နှင့် ထိုအချက်များ မရပါက ကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ သပိတ်မှောက် ထွက်ခွာမည် ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအခြေအနေအပေါ် စိတ်ပျက်သောကြောင့် ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်က ကော်မတီဝင်များ ဖြစ်သည့် ဦးဖေခင်နှင့် ဦးဘဆွေထံသို့ အောက်ပါ အတိုင်း စာရေးခဲ့သည်- (တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ အရေးနှင့် ၄၇ အခြေခံ ဥပဒေစာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၇၆၅)
ဒီနေ့ ဂျင်းဖောများနဲ့ အစည်းအဝေးကို ခင်ဗျားတို့ပဲ ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြပါ။ ကျွန်တော် မလာတော့ဘူး။ အရင်က ပြောထားတာ ထက်တော့ လျှော့လို့ မဖြစ်တော့ဘူး၊ အခု လျှော့တာတောင် တိုင်းပြည်က ဘာပြောဦးမယ် မသိဘူး။ ပြီးတော့ ဒီလို ပေးတယ် ဆိုတာကလဲ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ပေါင်းမယ် ဆိုလို့သာ ပေးတာပဲ။ သို့မဟုတ်ရင် ကျုပ်တို့ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ xxxxxxxxx ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကိုတော့ နယ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် သည့်ထက် မပိုနိုင်တော့ဘူး။ We have reached the limit of our concession ဆိုတာ ပြောပြလိုက်ပါ
ထိုစာသည် အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ် နောက်ဆုံး ပြောကြားခဲ့သည့် သဘောထား ဖြစ်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ကျဆုံးပြီးချိန်တွင် ဖဆပလ အဖွဲ့ကြီးသည် မူလ ကတိအတိုင်း လွတ်လပ်ရေး အရယူရန်နှင့် အင်္ဂလိပ်တို့ ဘက်မှ သဘောထား မပြောင်းမီ နု- အက်တလီ စာချုပ်ကို လက်မှတ် ထိုးနိုင်ရန် လုံးပမ်းခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေခံ ဥပဒေ အမြန် ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ ရသည်။ ကချင် ပြည်နယ် ကိစ္စကိုလည်း လူထု ဆန္ဒခံယူပွဲတွေ မလုပ်နိုင်ဘဲ ဗမာနဲ့ ကချင် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ညှိပြီး သဘောတူခဲ့ ရပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် ကချင် ခေါင်းဆောင်များ တင်ပြတဲ့ အပိုင်း ၂ ဇယားဝင် ဒေသများသည် ကချင် ပြည်နယ်ထဲမှာ ပါလာသည်။။ ထိုဒေသများမှာရှိတဲ့ ရှမ်း၊ဗမာများရဲ့ ဆန္ဒကို မယူဘဲ ဒီဒေသ တွေကို ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း သွင်းခဲ့တဲ့ အတွက် ကချင်များ ဘက်ကလည်း ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ ခွဲထွက်ခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ရန်၊ လူမျိုးစု လွှတ်တော်တွင် ကချင်ပြည်နယ် အတွက် လျာထားသော ၁၂ နေရာအနက် ၆ နေရာကို ကချင် မဟုတ်သူများကို ခွဲဝေပေးရန် တို့ကို သဘောတူခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်သည့် တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ယခင်က မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်းမော်ခရိုင်ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သော ဒေသ အားလုံးကို ကချင်ပြည်နယ် အဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး အခြေခံ ဥပဒေတွင်လည်း ၎င်းအတိုင်း ထည့်သွင်း ရေးဆွဲခဲ့သည်။
နောင် ၇၄ အခြေခံဥပဒေ၊ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေများ ရေးဆွဲဖို့ လုပ်သည့် အခါတွင်လည်း ကချင် ပြည်နယ် အရေးပြန်ပေါ် လာ သည်။ ၇၄ အခြေခံဥပဒေ အတွက် လူထုထံမှ အကြံပြုချက်များ တောင်းစဉ် ကာမိုင်း၊ မိုးကောင်း၊ မိုးညှင်း၊ အင်းတော် ဒေသများကို ရှမ်းနီပြည်နယ် အဖြစ် သတ်မှတ် ရေးဆိုသည့် လှုပ်ရှားမှု ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုအကြံပြုချက်များကို အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မတီက လက်မခံသည့် အတွက် ဗကပများ ထိုဒေသ အတွင်းသို့ ဆက်သွယ် ခေါ်ယူ လှုပ်ရှားရန် ကြံစဉ်မှုများ ပေါ်လာသဖြင့် အရေးယူခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဥပဒေ အတွက် အမျိုးသား ညီလာခံ ကျင်းပချိန်တွင်လည်း ထိုဒေသများကို ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသများ အဖြစ် သတ်မှတ်ရေး တင်ပြမှုများ ရှိသည်ဟု ကြားရသည်။ အသေအချာတော့ မသိ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကချင်တိုင်းရင်းသားများ၏ တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်လျောသည့် အတွက် ကချင် ပြည်နယ်ဟု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုပြည်နယ်သည် ကချင် တစ်မျိုးတည်း နေသည့် ပြည်နယ် မဟုတ်။ ကချင် ပြည်နယ်နေ့ကို ကချင် မနောပွဲ တစ်ခုတည်းဖြင့် ကိုယ်စားပြု၍ မရ။ ကချင် ပြည်နယ်၏ အနာဂတ်သည် ကေအိုင်အို တစ်ဖွဲ့တည်းနှင့် သက်ဆိုင်သည် မဟုတ်။ ကချင်ပြည်နယ် အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပင်လုံစာချုပ်ကို ညွှန်းမည် ဆိုလျှင် ပင်လုံစာချုပ်တွင် ကချင် ပြည်နယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်ကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကို တိတိကျကျ သိဖို့ လိုသည်။ ထို့ကြောင့် လက်လှမ်းမီသမျှ သမိုင်းကို ဝေမျှပေး လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
လူမှုကယ်ဆယ်ရေး ပရဟိတ လုပ်သူကို ထောင်ဆယ်နှစ်ချ - ဘီဘီစီ click here
The Lady ဇာတ်ကား အီတလီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ဖွင့်လှစ်ပြသမယ် - ဘီဘီစီ click here
နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းအကြောင်းပြ လယ်မြေသိမ်းကာ ပြန်လည်ရောင်းချမှုများရှိ - ဧရာဝတီ click here
(အယ်ဒီတာထံ ပေးစာ) ဇရပ်လှရွာမှ လာတဲ့စာ - နိရဉ္စရာ click here
မြန်မာတပ် မြောက်ဆံသင့်သော ဆရာမ မိုင်းအောင်တွင်ထူးခြားသည့်လက္ခဏာပြ - ကချင်သတင်း click here
ဒုက္ခသည်များကို ပြန်လက်ခံရန် မြန်မာက အပြုသဘော တုန့်ပြန် - နိရဉ္စရာ click here
၂၁ နှစ်ကာလအတွင်း တပ်မတော်သား ၁၃၅ ဦးကို မုဒိမ်းမူဖြင့် အရေးယူခဲ့ဟု ဆို - နိရဉ္စရာ click here
နိုင်ငံရေး အကျဥ်းသား လွှတ်ပေးရေး တင်ပြမှု လွှတ်တော်က လက်ခံ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
မှုဆယ်-မန္တလေးလမ်းတွင် စစ်ယာဉ်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြန်ပြီ - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
အစိုးရယာဉ်တန်းတစ်ခု တိုက်ခိုက်ခံရ - ဘီဘီစီ click here
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဆို ထောက်ခံဆွေးနွေး- ဘီဘီစီ click here
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်၂၀၀ကျော် ဗန်းမော်မြို့သို့တိမ်းရှောင် - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
NLD ရပ်တည်ခွင့် အစီရင်ခံစာ ကင်တားနားကို တင်ပြ - ဘီဘီစီ click here
ဒီပုတ်ထဲကပဲဒီပဲ - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင်ကို ထောင်၁၀နှစ်ချ - ဧရာဝတီ click here
သဘာဝပစ္စည်းသုံးရန် စာရေးဆရာများလှုံ့ဆော် - ဧရာဝတီ click here
KNU နဲ့ဆွေးနွေးရန် အစိုးရကိုယ်စလှယ်စေလွှတ် - ဧရာဝတီ click here
ဂျာနယ်နှစ်စောင်အရေးယူခံရ - ဧရာဝတီ click here
ဒေသခံပြည်သူများကို အသိမပေးပဲ ဆည်ရေဖောက်ချခဲ့သည့်အတွက် အင်္ဂပူမြို့နယ်အတွင်း ရေဘေးဒုက္ခကြုံနေရ - ရိုးမ၃ click here
မြစ်ကြီးနားမြို့ ကချင်ရပ်ကွက်တွင် ဗုံးဖောက်ရန် အာဏာပိုင်များ လုပ်ဆောင် - ကချင်သတင်း click here
မြန်မာအစိုးရ-KIA ပစ်ခတ်မှုတွင် အစိုးရပြည်သူ့စစ် တစ်ဦးကျ - ကချင်သတင်း click here
မြန်မာနိုင်ငံ HIV ကာကွယ်ရေးနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ဟန့်တားရေး လစ်ဟာဆဲ - ဗွီအိုအေ click here
ဘကြီးစိန် ညာတယ် - ဧရာဝတီဘလော့ click here
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား လွှတ်မပေးနိုင်သေး - ဧရာဝတီဘလော့ click here
လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးမှုများ ပြည်သူသိခွင့်မရ - ဧရာဝတီဘလော့ click here
အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ထုတ်ပြန်ဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က သမ္မတထံပန်ကြား - ဧရာဝတီဘလော့ click here